မောငျ(စှယျစုံကမျြး): October 2011
Author Anonymous at 11:06:00 PM0မှတ်ချက်
Author Anonymous at 10:46:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author Anonymous at 12:09:00 AM 1 မှတ်ချက်
ဟောဒီ ရင်ဘတ်ကြီးထဲကနူးညံ့သိမ်းမွေ့ တဲ့
ဒဏ်ရာတွေတိုက်စားခဲ့ ငါ့ ညတိုင်းကို
သတိရစိတ်ကြောင့် မြင်ယောင်မိတဲ့ မင်းပုံရိပ်တွေ
အသဲကွဲခြင်းတောင် လစ်လျုရှု့ ခဲ့ရတယ်..........
ကျန်ရှိတဲ့ အငွေ့ အသက်နဲ့ 
Author Anonymous at 8:27:00 PM 1 မှတ်ချက်
ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို မတိုက်စားပါနဲ့ 
တားဆီးပိုင်ခွင့်မရှိနိုင်လို့ ပါ .......။
နေရောင်ရှိရာနေရာရွှေ့ အလိုက်သင့် မျက်နှာမူပေးတတ်တဲ့
အချစ်ကိုသိဖို့ တုန့်် ပြန်မှုတွေကိုမကြည့်ဘဲ
အကြွေပန်းကို ရေဖြန်းရုံလောက်နဲ့ 
ငါဘယ်တော့မှမျှော်လင့်လို့ ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး..........။ ။
Author Anonymous at 12:35:00 AM3မှတ်ချက်
Author Anonymous at 9:38:00 PM0မှတ်ချက်
ငါ့ကို ဘဝပျက်စေချင် ခဲ့တာလား..............။
ငါ့ကို မရုန်း နိုင်အောင် ချည်ထားချင်တာလား............။
ရူးသွပ်ချင်ကြတဲ့ စိတ္တဇ အစွဲမျှသာပါ........။
နင် ခိုဝင်ကာ နားမိရင်
နင် ခပ်ဝါးဝါးပဲ မြင်လိမ့်မယ်............။
Author Anonymous at 11:25:00 AM7မှတ်ချက်
ရင့်ကျက်စွာ အရပ်မြင့်ခဲ့ပြီပဲ ဆိုပါတော့
သူ့ရှုထောင့်နဲ့သူ ချိုမြိန်နေခဲ့တယ်။ ။
FASHION MAGAZINE 13 / 2/2010
Author Anonymous at 5:57:00 PM2မှတ်ချက်
တောက်တက် တောက်တက် မင်းလမ်းလျှောက်တာအတော်မြန်
အောင်ဘညို အေးကို ငါအခင်ဆုံးကောင်တွေ
တစ်မိုးဟောင်းတစ်ဆောင်းသစ်ချိန်ပဲ ခင်ဗျား ထွက်သွားတယ်
အောင်ဘညိုက ဂိ လိုက်တာကိုက်တယ်
Author Anonymous at 9:12:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author Anonymous at 9:24:00 AM5မှတ်ချက်
နင် လှမှ တောင့်မှ ဖြောင့်မှ
မနက်ခင်းအသစ်ကျပ်ချွတ်လေးရဲ့ အစမှာ.....။ ။
Author Anonymous at 1:12:00 PM 1 မှတ်ချက်
Desktop ပေါ်က Short Cut Arrowလေးများကိုပျောက်စေချင်ရင်ဒီလိုလုပ်
ဆော့ဝဲမသုံးပဲ ဖျောက်လို့ ရတဲ့ နည်းတော့ရှိပါတယ် ဆော့ဝဲနဲ့ ဆိုပိုမြန်တာပေါ
ကလစ် တစ်ချက်ပေးလိုက်ရုံပဲ WindowVista အတွက်လို့ရေးထားပေမယ့်
Window7 မှာလည်းရတယ်းသုံးWindow XPသမားတွေကတော့ကိုယ်တိုင်စမ်း
ကြည့်ဗျာ ၀တို့ အလုပ်မှာက အဆင်မပြေဘူး ခုံတွေကမန်နေဂျာနဲ့ ရှေ့ နောက်
ထားလိုက်တော့ ဘလော့လေး ကြည့်ဖို့ အရေး ကို မန်နေဂျာ မလာပါစေနဲ့ ဆု
တောင်းနေရတယ် အဆင်ပြေရင် ရုံးက XPစမ်းကြည့်ပေးမယ်ဗျို့ .................။
ဆော့ဝဲမသုံးချင်ရင် ဒီမှာကြည့် http://www.tweaks.com
Author Anonymous at 9:29:00 AM 1 မှတ်ချက်
ဒါလေးကတော့ ဘလော့ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Mozila Firefox မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သီချင်းသံ
မလာဘူးဆိုရင် Window Midea Player 11 Add On မရှိလို့ ပဲဖြစ်မယ် သီချင်း
မလာဘူးဆိုရင် Install Missing Plugin စာ တန်းပေါ်နေပြီး အင်စတောလုပ်ဖို့ 
လင့်လေးပေးလာပါလိမ့်မယ့် အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကလုပ်နိုင်ပါတယ် အင်စတော
မော်ဇီလာကို ပြန်ဖွင့်ပါ Missing plugin မပေါ်တော့ပဲ သီချင်းသံ လာနေတာကို
တွေ့ ပါလိမ့်မယ်။ အဖြူရောင်သံစဉ် ရေဒီယို သီချင်းသံလာရင် မလိုဘူးနော်..။
ဒီမှာDowload ယူပါ Window Media Plugin Firefox
Author Anonymous at 9:27:00 AM0မှတ်ချက်
ဖေဖေ ရေလို့ ခေါ်နေမြဲလေ.............။
ငါတို့ ကို လျှစ်လှူရှုသွားကြတဲ့ မိဘတွေ...........။
ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တာလည်း.............။
Author Anonymous at 11:23:00 AM3မှတ်ချက်
Author Anonymous at 11:10:00 AM0မှတ်ချက်
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်သမီးလေးရဲ့ဇာတာနဲ့ အနာဂတ်ကံကြမ္မာအကြောင်း
ဖွားဇာတာမှာမဟာဘုတ်နည်းအရ ၁၄-၁၀-၂၀၁၁ ရာဇဖွားဖြစ်တယ်လို့ ဆြာ
မောင်မှ တွက်ချက်လိုက်ပါတယ် အရင်းမွေးနဲ့ အဖျားခံ မှည်ရန်ပဉ္စပွတ် ဆိုတဲ့
မူအရ နာမည်ပေးခဲ့လျှင် သောကြာနှင့်စပီး အင်္ဂါနှင်ဆုံးသောနာမည်ဖြစ်လိမ့်
သုံးလုံးမှည့်လျှင် စနေနံ အလယ်ခံမည်ဟု ခန့် မှန်းရကြောင်းနဲ့ မဟာဇနကရဲ့
သင်္ဘောပျက်ကိန်းအရ ဒီကလေးမလေးဟာ ၁၈နှစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျရင်ကျ
မကျရင်တော့ အသက်၃၀ကျော်မှရမယ် ကံဇာတာဟာ၁၀နှစ်သမီးမှာညံ့နေ
ပြီး ၁၆-၁၇-၁၈ ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်မယ်နက္ခတ်အရကြည့်လျှင်လည်း
လူ-ဘီလူး-နတ် သုံးပါးတွင် လူနက္ခတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတာကောင်းဖြစ်တယ်
မဟာဘုတ် အောင်လံထူ စစ်သူကြီးပွဲ ခုစားဂဏန်းရ ၄ဂဏန်းသမားဖြစ်တဲ့အ
တွက် ငယ်စဉ်ကထဲက ချမ်းသာပြီးမိဘရဲ့အရပ်အာဝါသကိုကောင်းကောင်းခံ
စားရသူ စိတ်ထားဖြူစင်တတ်ပီး သဘောမနောကောင်းသူဖြစ်မယ် လင့်ကံရ
မကောင်းတဲ့အတွက် အားကိုးအားထားပြုမရသောသူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတတ်
တယ်ဇာတာအားလုံးခြုံကြည့်သော် ရဇဖွား နက္ခတ်ကောင်းသူတစ်ဦးမူရဲ့အရ
ထက်မြတ်သောစိတ်ကူးဥာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံမည် ထင်ရှားကျော်ဇောတတ်သည်..။
အိမ်း..တွက်ရရင်တော့ နည်းပေါင်းတစ်ထောင်..အလကားဆိုတော့ ဒီလောက်
ပဲ ..၀အိပ်ရေး ပျက်လယ်..မီဟောတော့ဝူး....စောင်ရှိခြုံ စောင်မရှိမခြုံနဲ့ ဆီရှိ
ဆမ်း မရှိမဆမ်း..သတ်ဘေသတ်ထာ ကံထီးဒကာ...ပုံ/ ဆြာ..မောင်.............။
Author Anonymous at 10:44:00 PM5မှတ်ချက်
ခင်ဝမ်းရဲ့ ဧရာဝတီအနှံ့ လျှောက်လည်ပြီးတဲ့နောက်
Author Anonymous at 11:45:00 AM3မှတ်ချက်
ငါနင့်ကို ချစ်တယ်လို့ 
စကားတခွန်း ပြောဖို့ အတွက်
ငါ့နုတ်က ဒီစကားတခွန်းထွက်ခဲ့ တာပါ...................။
တဘဝလုံးစာအတွက် ပုံအောပြီးချစ်ခဲ့ မိတာ.........................။
နင်နဲ့ ငါတနေ့နေ့ မဆုံနိုင်ဘူးလို့ 
သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်တဲ့ သူတွေမှ သစ္စာရှိတာ
သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေကသစ္စာရှိအောင် ချစ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး
ငါနင့်အပေါ်သစ္စာရှိရှိချစ်နေမယ်ဆိုတာ တနေ့နေ့မှာ နင်သိလာမှာပါ.......။
ငါ့ဘဝတခုလုံး ရေစုံမှောက်ခဲ့ ပါပြီ
ရှိသမျှအချစ်လေးနဲ့နင့်ကိုနောက်ဆုံးပုံအောပြီးချစ်ခဲ့ တာ
နင်ပြန်မချစ်တော့တဲ့ နောက် ငါ့ဘဝလည်း
နင်ပြောတဲ့ လက်တွဲဖော်ကိုလည်း နင်ကလွဲပြီး
နင့်ကိုချစ်မိလို့ငါ့ဘဝပျက်တော့မယ်ဆိုလည်း
ငါလေနင့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တခုတည်းနဲ့ 
ရင်နာစွာနဲ့ ပဲ ငါ့ဘဝအပျက်ခံပါ့မယ်........................................။
Author Anonymous at 2:48:00 AM4မှတ်ချက်
Power Data Recovery (ပျောက်သွားတာတွေပြန်ရှာဖို့ )
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ပျောက်သွားတာတွေ ပြန်ရှာဖို့သင့်တော်တဲ့ဆော့ဝဲ
ကောင်းလေးပါ ရည်းစားပျောက်လည်းပြန်ရှာရပါတယ် ဟိုနေ့ ကဟန်ဂျီအင်း
ပျောက်သွားလို့ ပြန်ရှာတာရတယ်ဗျာ..ဟက်ဟက် ..အသုံးလိုရင်ယူရအောင်
ဒီမှာ Download ယူပါ Power Data Recovery
Author Anonymous at 9:41:00 PM2မှတ်ချက်
Labels: မှားဖျက်တာပြန်ရှာဖို့ Data Recovery
သမီးလေးတစ်ယောက် လိုချင်ခဲ့တာ အဆုံး
သူကတော့မြို့ကလေးရဲ့ မနွေးထွေးတဲ့ တေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ
Author Anonymous at 7:54:00 PM 1 မှတ်ချက်
တရားမျှတမှု သာ မိုးဆိုရင်
ငါတို့ မိ သား စု ပါ ပဲ။ ။
Author Anonymous at 8:50:00 PM5မှတ်ချက်
လမင်း ဝါဝါ သာတဲ့လ
ဆီမီး ရောင်စုံ ဖြာခဲ့ ကြ
ငါ အဝေးက လွမ်းလှတယ်............။။
အဖိုးတန် အမျိုးမှန်တဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့
ငယ်ကျွမ်းဆွေ သီချင်းကို အပြတ်....ဟဲ.....မယ်.........။။
Author Anonymous at 9:25:00 PM6မှတ်ချက်
Virus ၀င်လို့ပိတ်သွားတဲ့ အရာတွေအတွက်အော်တိုပြန်ပြင်ဖို့ ဒါလေးယူ
ဒီဆော့ဝဲလေးက Virus ကြောင့် ပျောက်သွားတဲ့ Folder Option တို့ ဘာတို့ 
ညာတို့အလွယ်တူပြန်ယူချင်ရင် လိုပါတယ် ဆောင်ထားချင်ရင်ဆွဲ..............။
ဒီမှာ Download ယူပါ Re enable Portable
အဆန်ခရီးကို လှော်ခတ်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်
သောက မုန်တိုင်းတွေ ရဲ့ကြားမှာ
အလွမ်းမိုးတွေက ထာဝရ စွေနေတုန်းပဲအမေ.............။
အသစ်အသစ်တွေ ပြောင်းလည်းနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ
ရိုးသားမှုဆိုတာ ခပ်ပါးပါးပဲ ကျန်တော့တယ်.............။
လိမ်ညာ မှုတွေရဲ့ အောက်မှာ
သာယာနေမိကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက်
ယုံကြည်အားကိုးမှု ဆိုတဲ့ အရာဟာ
သတိရလို့ ကြတဲ့ မျက်ရည်တိုင်းမှာ
အမေ ဆိုတာ နေရာယူနေသမျှ
၁၅၀၀ ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းတရား
ဘာဖြစ်မယ်မှန်း မသိတဲ့ မနက်ဖြန်တိုင်းမှာ
ရိုးသားစွာ နေထိုင်ဖို့ အတွက်ကြိုးစားရင်း
ခဏခဏ ပါပဲ အမေ................။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို မုန်းမုန်း
ပြုံးနေတဲ့ အမေ့ရဲ့ ရင်ခွင်လေးက
Author Anonymous at 3:15:00 PM6မှတ်ချက်
အချိန်ရမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်လေးတွေကို Scan စစ်ကြည့်စေချင်
ဟိုတလောက ကိုဘုန်းကလည်းပြောလို့ဆိုဒ်ဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုလား
ပြောတော့ပြောတာပဲ အဲ့ကြောင့် ဆိုဒ်ကို စစ်ကြည့်လိုက်တာ ဘာမှတော့မရှိ
သူမူးနေလို့ နေမှာပါ..ဟဟ...ကိုဘုန်းရေ သားဆိုဒ်မှာဘာမှ ရှိဝူးနော်.......။
ဆိုဒ်ကိုစစ်ဖို့ က့ ဒီလင့်ကိုသွား လိုက် http://sitecheck.sucuri.net/scanner/
မိတ်ဆွေဟာ ဘလော့ရေးနေသူ တစ်ယောက် ဆိုကြပါစို့ တစ်နေ့ ကိုယ့်ဘလော့လေး ကိုဝင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အဲလို အနီရောင် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ Reported Attack Page ဆိုပြီး သတိပေးစာကြီး ပေါ်လာရင် ဘယ်လိုများ ခံစားရမလဲ...
ဟုတ်ကဲ့ ခံစားရသူတွေ ခံစားပြီးကုန်ပါပြီဗျာ သေပြီပေါ့ ဧည့်သည်တွေ လာရင် ကိုယ့်ဘလော့ကပဲ ဧည့်သည်တွေကို ဗိုင်းရပ်စ် တွေ လွှတ်နေသလိုလို ဝင်ဖတ်ရင်ပဲ ကွန်ပြူတာကြီး ပျက်သွားတော့ မလိုလို ဆိုတော့ အကုန် ပြန်ပြေးကြပြီပေါ့...
ဟို တစ်နေ့က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ ဘလော့ အဲလို ဖြစ်သွားပါတယ် ကျွန်တော့်ကို အကူအညီ တောင်းတာနဲ့ ဟိုလိုက်ဖတ် ဒီလိုက်ဖတ် နဲ့ လုပ်သင့်တာ လုပ်ပေးလိုက်တာ ဟော ဒီည လုပ်လိုက်တယ် မနက်ကျတော့ အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ပျောက်သွားပါလေရောဗျာ....
ဖြစ်တာက ဒီလိုပါ ဂူဂယ်က ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို သူတို့ လိုက်ပြီး စစ်ပါတယ် အဲဒီမှာ တစ်ချို့ ဆိုဒ်တွေက လင့်သေ နေတာတွေကို သူတို့ ဆိုဒ်မှာ ချိတ်ထားခြင်း embed နဲ့ သုံးရတဲ့ ဗွီဒီယို လင့်တွေ PDF ဖိုင်တွေ သီချင်း ဖိုင်တွေ များပြားစွာ သုံးထားပြီး လင့်များ သေနေခြင်း နောက် Js ဖိုင်များ Script များ လင့်တွေ သေနေခြင်း အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ တွေ့ရင် သူတို့က ကိုးပတ် တိတိ ကြည့်ပါတယ် နောက်ပြီးရင်တော့ ခုနက ပြောသလို Black list ထဲ့ ထည့်လိုက်ပြီး အဲဒီ အနီရောင် သတိပေးစာကြီးက ပေါ်လာပါတော့တယ်..
ကဲ ဒီတော့ အဲဒါကို ဘယ်လို ပြန်ဖြေရှင်းမလဲ ဂူဂယ်က White listed ထဲ ပြန်ထည့်ပေးအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ???? ဘလော့ဂါ ညီကို မောင်နှမတွေ အတွက် ဝေမျှ ပေးပါရစေ..။
ကိုယ်မဖြစ်ဘူး လို့တော့ မတွက်ပါနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော် သူများ ဘလော့လင့်တွေ ထည့်ပြီး လိုက်စမ်းပြီးပါပြီ နာမည်ကြီး ဘလော့ တစ်ချို့ အပါ အဝင် အတော်များများ black list ထဲ မဝင်သေးပေမယ့် Malware လို့ ခေါ်တဲ့ လင့်အသေတွေ ချိတ်ထားတာ အများကြီး တွေ့နေပါတယ်..
၁/ဟောဒီလင့်ကို http://sitecheck.sucuri.net/scanner/ သွားပြီး ကိုယ့်ဘလော့ လိပ်စာ (http://www များ ထည့်ရန်မလိုပါ) ထည့်ပြီး Verify လုပ်လိုက်ပါ။ ခဏလေး စက္ကန့်ပိုင်းလောက် စောင့်ပြီးရင် အောက်ကလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. မိမိဆိုဒ်၏ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သူများလဲ လစဉ် သွားရောက် စမ်းသပ် ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်..
၂/အဲလို ပေါ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဆိုဒ်မှာ လင့်ချိတ်ထားတဲ့ အထဲက အဲဒီ အနီပြနေတဲ့ လင့်တွေကို ပြန်ဖျက် ထုတ်ပေးပါ.. အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ဆိုဒ်ဘားမှာ ရှိတဲ့ လင့်တွေ widged တွေကို အကုန် ဖြုတ်ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ ပြီးရင် တစ်ခေါက် ထပ်စမ်းကြည့်ပါ အောက်က ပုံလို ပေါ်လာတဲ့ အထိပေါ့ ဘယ်လို လုပ်လုပ် အဆင်မပြေရင်တော့ တန်းပလိတ် အသစ်ပြောင်းထည့်လိုက်ပါ....။
သူ့မှာ အကုန် ရှင်းလင်းပြီးသွားပြီ ဘာမှ Malware တွေ မရှိတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဆိုဒ်ကတော့ Blacklisted ဝင်နေတုန်းပါပဲ.
ကိုယ့်ဆိုဒ်ဟာ အလည်လာသူတွေ ကိုဘာမှ မထိခိုက် စေတော့ဘူး ဆိုတာကို ဂူဂယ်ကို သတင်းပို့ပြီး စစ်ခိုင်းရပါမယ် ဒါမှ သူတို့ စစ်ပြီး ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို Whitelisted ထဲ ပြန်ထည့်ပေးမှ အဲဒီ အနီရောင် သတိပေးစာတန်းကြီး ပျောက်မှာပါ..အဲဒါ လုပ်ဖို့ကတော့
၃/ ဟောဒီလင့်ကို https://www.google.com/webmasters/tools/home သွားလိုက်ပါအုံးဗျာ.. ပြီးရင် ကိုယ့်ဘလော့ကို အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail လိပ်စာနဲ့ ပက်စ်ဝပ် ပေးပြီး ဝင်လိုက်ရင် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာကို ရောက်ပါမယ်..
အခု မြင်ရတဲ့ ပုံမှာ ကျွန်တော့် လိပ်စာနှစ်ခုကို မြင်ရမှာပါ မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး ဝင်တာ ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်နှစ်ခုလိုမျိုး မြင်ရအုံးမှာ မဟုတ်ပဲ အပေါ်မှာ မြင်ရသလို ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ဘလော့တွေကို ပြနေတာပဲ မြင်ရမှာပါ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဘလော့ကို Tip လုပ်ပေးပြီး Add selected sites ဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်ရင် Sites ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ် ခုနက Add လိုက်တဲ့ ဆိုဒ်ဒိုမိန်း နာမည် ပေါ်လာမှာပါ..
၄/အဲ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဘလော့လိပ်စာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် ဟုတ်မဟုတ် ပိုင်ရှင် ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့လေ စစ်ပါသေးတယ် အောက်က ပုံလေး အတိုင်းပါပဲ ပထမဆုံး Addameta tag to your site's home page ဆိုတာကို Tip ပေးလိုက်ရင် Instructions: ဆိုတာလေး အောက်မှာ ထပ်ပွင့်လာပါမယ် အဲဒီက ကုဒ်ကို ယူပြီး ကိုယ့် ဘလော့ရဲ့ HTML ကုဒ်တွေကြားထဲ ထည့်ရမှာပါ ..
ဘယ်လို ထည့်မလဲ ဆိုတာက ကိုယ့် ဘလော့ထဲ Login ဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ Design ထဲကနေ Edit Html ကို ဆက်ဖွင့်ပါ ပြီးရင် <head> ရဲ့ အောက်နား သို့မဟုတ် <body>ရဲ့ အပေါ်မှာ ခုနက ရထားတဲ့ ကုဒ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် Verify ခလုတ်လေး နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
၅/ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ ခုနက အောက်ကို Add လိုက်တဲ့ ဒိုမိန်းကို နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို နောက်ထပ် စာမျက်နှာ တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ် အဲဒီ စာမျက်နှာရဲ့ ဘယ်ဘက်ဆိုဒ်ဘားမှာ Diagnostics ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ နောက်ထပ် လေဘယ်တွေ အများကြီး ထွက်လာပါမယ် အဲဒီထဲက Malware ကို ဆက်နှိပ်ပြီး Requestareview. လုပ်ပေးလိုက်ပါ
တစ်ခုရှိတာကတော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို စကင် ဖတ်ပြီး အကုန်ရှင်းလင်းပြီ Blacklisted ဝင်နေတာပဲ ကျန်တော့တယ် ဆိုမှ အဆင့် ၃ ၊ ၄ နဲ့ ၅ ကိုလုပ်ပါ ပြီးသွားရင်တော့ ပစ်သာ ထားလိုက်ဗျာ (ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကို လုပ်ပေးတုန်းကတော့ သိပ်မကြာလိုက်ဘူးဗျ လေးငါးခြောက် နာရီ လောက်ပဲ ကြာ လိုက်တယ် ထင်တာပဲ )သတိရလောက်မှ ကိုယ့်ဘလော့လေး ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အနီရောင် သတိပေးစာကြီး မရှိတော့တဲ့ လာလည်တဲ့ ဧည့်သည်တွေ ရဲ့ ဘရောက်စ်ဇာတွေ ကွန်ပြူတာတွေကို ဟမ်းစေတဲ့ အန္တရာယ်ကို မဖြစ်စေတော့တဲ့ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို စိတ်ချမ်းသာစွာ မြင်တွေ့ရမှာပါ..
Author Anonymous at 8:25:00 AM5မှတ်ချက်
တွဲလက်ဟာ ကွဲအက်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတင်းတင်းဆုပ်လို့
Author Anonymous at 3:22:00 PM 1 မှတ်ချက်
၂၀၀၄ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ... ခမ်းခြောက်ခြင်းအိပ်မက်မြစ်တို့မြစ်ဖျားခံရာ တက်မစုံ လက်တစ်စုံနဲ့လှော်ခတ်ရင်း.... လ မလင်း...
သဘောအတိုင်းပါ ..မေ (ဖြစ်ရပ်မှန် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည်)
မတွေးတော့ဘူး မင်းအကြောင်းတွေ.... ငါ့စိတ်သာအခါခါညာ အိပ်မက်ဟာ မင်းအတွက် ကဗျာ... ရင်နာလည်း အစဉ်သာအမြဲ ထင်ကာဆဲ နှလုံးသားအခြေ နေကာလေ မေ.......
လောကနီတိကို ဖုန်းကနေ အလွယ်ဖတ်နိုင်ဖို့လောကနီတိ apk သုံးကြည့်ပါ
လောကနီတိ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့ ဒီဆော့ဝဲလေး ဖုန်းထဲထည့်ထားလိုက်ရင်ရပီ စာအုပ်မလိုတော့ဘူး ဖတ်မှတ်လိုက်နာစရာ နီတိတွေကို ဖုန်းကနေဖတ်ရပြီ ...
မလွှဲသာ.............. ခွဲခွာသာ တစ်နယ်စီ ဝေးပြီပေါ့............ ဝေးရပ် အလွမ်း.............................။ .............................. ...
အချစ်ရယ် ဒီစာကိုရေးလိုက်လို့ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ်၊ မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြတယ်၊ ခရု ခါးတောင်းကျိုက်ဖမ်းတယ်လို့ မထင်ေ...